Tenga Allylestrenol powder (432-60-0) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Madzimai eHormoni / Allylestrenol upfu (432-60-0)
Rating: SKU: 432-60-0. Category: Madzimai eHormoni
MUTSVENE unobatanidza uye unogadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika mukurongeka kweAllylestrenol powder (432-60-0), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwehutano.
Allylestrenol powder, zita rinonzi Gestanin neTurinal pakati pevamwe, inonzi progestogen inoratidzika yakabatana neprogesterone yakapiwa mukutengesa uye kunowanzopererwa, nekudzivirira kusati kwaitwa basa. Zvisinei, kunze kwekuperevedzwa kweprogesterone, kushandiswa kwakadaro hakugoni kurudzirwa.
Molecular Kurema: 300.48
Kemikari Mazita: Allylestrenol powder
Mazita eBrand: Gestanin naTurinal pakati pevamwe, Allylestrenol powder, Gestanin powder, Turinal powder, 432-60-0
Tora Allylestrenol powder (CAS 432-60-0) nomuromo sezvaanorayirwa, inogona kutorwa pamwe kana pasina kudya. Iwe unokwanisa izvi mishonga pamwe nezvokudya kudzivirira GI kutsamwa. Tevera mazano ose pamusoro pezvakagadzirwa. Kana iwe usina chokwadi nezvehupi hupi hwehuwandu hwemashoko, taura nachiremba wako kana wemishonga.
Udza chiremba wako kana chirwere chako chinoramba chichiwedzera kana kana uchikurira zviratidzo zvitsva. Kana iwe uchifunga iwe unogona kuva nechinetso chakakomba chorwere, tora rubatsiro rwechiremba pakarepo.
Allylestrenol powder inonyanya kuchengetwa pane firiji yekunze kubva pane chiedza chakanaka uye unyoro. Kuti udzivise kuparadzwa kwezvinodhaka, haufaniri kuchengetedza Allylestrenol powder muimba yekugezera kana mufiriji. Panogona kuva nemhando dzakasiyana dzeAllylestrenol powder iyo inogona kuva yakasiyana siyana yekuchengetedza. Zvakakosha kugara uchitsvaga purogiramu yemiti yemirayiridzo yekuchengetedza, kana kuti kumbira chiremba wemishonga. Kuti uchengetedze, iwe unofanira kuchengeta mishonga yose kure navana uye zvipfuwo.
Iwe haufaniri kunge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uine Allylestrenol powduru pasi muimba yega kana kuti uadururire mumvura kunze kwekurayirirwa kuita saizvozvo. Zvakakosha kubvisa zvachose chigadzirwa ichi kana chapera kana kuti chisingazodiwi. Tsvaga muzvinamori wako kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pokuti ungachengeta sei zvakanaka chigadzirwa chako.
Ndeipi iyo miyo yeAllylestrenol powder
ICHI CHINOKUDZIDZWA CHINOPARIDZWA NEZVANHU ZVINOGONA KUZIVA ZVINOKOSHA NEZVO
HAKUSVINZISWA SOMUNYANYA WOKUTANGA KUDZIDZISA KUNYANYA KUTI ZVINHU ZVINHU ZVINOKUDZIDZWA
Ndeipi chirwere cheAllylestrenol powder (Gestanin powder) kune munhu mukuru?
Mukuru: 5 mg muromo katatu pazuva kwezuva 5-7.
Ndeipi chirwere cheAllylestrenol powder kumwana?
Nhamba yacho haisati yasimbiswa muvana vevana. Zvinogona kunge zvisina ngozi kune mwana wako. Nguva dzose inokosha kunyatsonzwisisa kuchengetedzwa kwemishonga vasati vashandisa. Ndokumbira kubvunza chiremba wako kana wemhizha kuti uwane mamwe mashoko.
Ko Allylestrenol powder inowanikwa sei?
Allylestrenol powder inowanikwa muzvipimo zvinotevera uye simba:
Tetheni, Muchirevo: 5 mg.
Chii chandinofanira kuita kana zviitiko zvinokurumidza kana kudarika?
Kana zviitiko zvekukurumidzira kana kuwedzeresa, dana nharaunda yako yepamunharaunda yepamhanho kana kuenda kune imwe nzvimbo yako yepamusoro inotyisa.
Chii chandinofanira kuita kana ndikarasikirwa neipi?
Kana iwe uchinge uchinge uchitadza chirwere cheAllylestrenol powder, chiitore icho nokukurumidza sezvinobvira. Zvisinei, kana iri nguva yenguva yako inotevera, rambai murasi unoshaiwa uye tora chiremba chako chenguva dzose sezvarongwa. Usatora dhiiti mbiri.
Hello Health Group haina kupa mazano ekurapwa, kuongororwa kana kurapwa
Nzira yekuti Allylestrenol powder inoshanda sei
Allylestrenol powder yakafanana pakugadzirisa uye kushanda kune progesterone. Progesterone inobatanidza maitiro ezvokuita zvemaprojeni ezveprogestins. Progesterone inosunga kune progesterone uye estrogen receptors. Target masero anosanganisira chikadzi chekuberekwa, chirwere chemamota, hypothalamus, uye pituitary. Kana imwe nguva yakasungwa kumusana, progestin seProgesterone inotadzisa nguva yakawanda yekubudiswa kwegonadotropin inokonzera hormone (GnRH) kubva ku hypothalamus uye inofanirwa kubuda kwep-pre-ovulatory LH (luteinizing hormone). Madzimai ane chirwere chakakwana chestrogen isrogen, progesterone inoshandura endometrium yakawandisa ichienda kune imwechete. Progesterone inokosha pakuvandudzika kwezviviri zvemuviri uye zvakakosha kuwedzera kupera kwemakemikari kune kuiswa kwemuviri. Pane imwe nguva mwana achiri mucheche akaiswa, progesterone inobatsira kuchengetedza pamuviri. Progesterone inokurudzirawo kukura kwemammary alveolar tissue uye inoita kuti uterine inetseke. Iyo ine zvishoma isrogenic uye androgenic basa.
Glucuronide uye sulphate conjugates zvekudzivirira pamuviri uye pamuviri wemakumbo zvinowedzerwa mumuguta uye bile. Progesterone metabolites iyo yakanyanyiswa mu bile inogona kugoverwa zvekugadziriswa kwegungwa kana kuti inogona kushandiswa mucheka. Progesterone metabolite yakanyanyiswa zvakanyanya neyaiyo.
Allylestrenol powder inopiwa kuvarwere vakambotambura nematambudziko akawanda, vasati vashanda kana kuti benign prostatic hyperplasia. Chirwere ichi chinovhiringidza hormone iyo inokonzera kusunungurwa kwegonadotropin uye inononoka kupera kwema-hormone pre-ovulatory luteinizing.
Iwe unofanirwa kubvunza chiremba wako nekuwana kurapwa kwakakwana kwehutano hwako hwehutachiwana uye humwe hutano hwakanga hwave huchidzivirira kubudirira kwekuita pamuviri kare. Iwe unofanirwa kuita kuti chiremba wako azive nezvehupi huripo huripo huripo huripo huripo kana zvirwere zvawaiva nazvo, chero hutano hwemishonga kana zvinodhaka, kana iwe uri pane chero mapiritsi ehommonal, zvokudya zvinowedzera kana zvimwe zvinodhaka zvemishonga.
Iwe unofanirwa kutora mishonga iyi nekuchenjerera uye sezvinorayirwa nachiremba wako kunyanya kana iwe uri murwere cheshuga, migraine, kuurayiwa, chirwere ane mwoyo, chirwere chepachiva kana chirwere cheropa, kana iwe usingadi kusangana neglucose.
Ikoko kunogona kuva nemimwe migumisiro inosanganisira kurutsa uye kushungurudza, kusagadzikana musoro, kusuruvara kweganda zvakadai semashes, mikoko, ruzivo, kuvhara kwehuro, rurimi, miromo, maziso akasvibiswa uye chirwere, chirwere chepakati uye kurwadziwa kwepamuviri, kuvhiringidzika kana kurambana, kuchinja yeropa. Iwe unofanirwa kudzivisa kutyaira motokari kana kubuda panze kazhinji mushure mokunge watora mushonga.
Iyo Allylestrenol powder Iine Mhinduro Dzose
Allylestrenol powder inoshandiswa pakurapa, kutonga, kudzivirira, & kugadzirisa kwezvirwere zvinotevera, mamiriro uye zviratidzo:
-Recurrent kubata pamuviri
-Kubvisa pamuviri zvakanyanya
-Kutadza kwekuwedzera kukurumidza
Allylestrenol powder inogona kushandiswawo nokuda kwezvinangwa zvisingatauri pano.
Zvimwe zvinokonzerwa neGestin (Allylestrenol powder) zvinosanganisira avo vakanyorwa pasi apa. Kana chimwe chezviitiko izvi chichiramba chiripo, kana chakaipa, unofanira kubvunza chiremba wako pakarepo.
Izvo zvave zvataurwa kuti vana vakaberekerwa navanaamai vakatora mishonga iyi vangave nepamusoro-soro kudarika uremu hwepanyama, asi izvi hazvifungidziri kuti hazvina ngozi.
Nzira yekutenga Allylestrenol powder kubva kuAASraw